पत्रपत्रिका Archives - Page 32 of 32 - अभियान खबर
काठमाडौं – सरकारले दुई थरी ब्यालेन्स सिट बनाएर कारोबार गर्दै आएका करदातामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । समाचार अनुसार, केही व्यापारीले राजस्व थोरै तिर्ने उद्देश्यले वास्तविक ब्यालेन्स सिट लुकाएर कम कारोबार भएको व्यालेन्स सिट देखाउने गरेको पाइएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
काठमाडौं – जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन । अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर […]
काठमाडौं 5- जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन जुम्ला प्रहरीले दुई झुटको सहारा लिएको खुलेको छ । सरकारले प्रहरी बल प्रयोग गरेर बिहीबार केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएको हो । प्रतिष्ठान परिसरमा प्रहरीले भिड नियन्त्रणका लागि बिहीबार हवाइ फायर गर्दा प्रहरी जवान कमल आचार्यको मृत्यु भएको घोषणा डीएसपी डा. तपनकुमार […]
प्रचण्डले भने, ‘डा. केसीका माग जायज छ’
साउन5। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग जायज रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुले बताएका छन् । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले केसीका माग सम्बोधन गर्न नसकिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले डा. केसीका माग जायज भएको बताएका हुन् । ‘डा. केसीले उठाएका माग जायज छन् […]
‘सरकार ! फोहर फाल्न रेल नै कुर्नु पर्ने हो ?’
१ साउन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले माइतीघर मण्डलामा जनप्रदर्शन गरेको छ । उसले जनजीविका, विकास लगायतका माग राख्दै मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले १ साउन, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले माइतीघर मण्डलामा जनप्रदर्शन गरेको छ । उसले जनजीविका, विकास लगायतका माग राख्दै मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले लगायतका […]